Malezia - Towers Petronas
Lahatsoratra taloha: Torohevitra - Malaysia - Batu Caves
Lahatsoratra manaraka: Singapore sy ny tsiambaratelo ao ambadiky ny angady 500 dolara
Posted 1 Desambra 2018 ny Rômulo Lucena
Mandehana any Kuala Lumpur, ary tsy mamangy ny Tranobe Petronas dia toy ny mandeha ho any Rio de Janeiro, ary tsy mamangy ny Kristy ny Mpanavotra, na Paris ary tsy mety manatona ny Tour Eiffel. Noho izany dia holazaiko anao bebe kokoa momba ity karta miafina ity avy any Malezia.
Ny fomba mora indrindra mankany amin'ny Petronas Towers dia amin'ny Metro. Afaka miala eo amin'ny fiantsonan'ny KLCC Station izay eo am-pototry ny iray amin'ireo tilikambo roa. (Ary ny metro Malay sy miteny anglisy, ankoatra ny mampiseho ny famantarana ny fotoana. Noho izany, mora ny mahazo ny. Ny fomba iray hafa dia ny tonga ny fiara fitateram-bahoaka na fiarakaretsaka (na Uber).
Ny toro-hevitra azoko dia ny mividy ny tapakila mialoha. ao amin'ny tranonkalany manokana Petronas Towers eto. Ary ny antony dia tsotra, misy fetrany ny fivarotana tapakila ary raha tsy hividy ny fotoana dia afaka ny ho hita intsony izany andro izany, na ihany no azo jerena amin'ny fotoana iray hafa. Noho izany raha mividy ny tapakila amin'ny voalohany ianao, dia mora ny manao drafitra.
Ny tapakila dia manome fahafahana miditra amin'ny Skybridge, izay 170 metatra miala amin'ny tany. (Latsaky ny antsasaky ny haben'ny ny trano. Ny fijery misy efa tena mahatalanjona. Izany no mihidy na dia eo aza manana maro ny fitaratra na aiza na aiza noho ny futuristic famolavolana. Rehefa afaka izany,-piverinao any amin'ny ascenseur mba in 86 gorodona. To momba 450m ny tany, na ny marina 451,9 metatra any 86 tany. izany rehetra izany dia omena araka ny marina ho an'ny trano no efa lehibe indrindra eo amin'izao tontolo izao rehefa naorina sy nandritra ny taona vitsivitsy. Androany no tsy na dia eo amin'ny lehibe indrindra 10. Tadidio fa ny ambony kokoa izao tontolo izao dia ny Burj Khalifa miaraka amin'ny 828 metatra (efa ho avo roa heny).
Saingy andeha isika hiresaka momba ny zavatra manan-danja. Ny fomba fijerin'ny valo amby valopolo. (tany 86) dia tena mahatalanjona! Afaka mahita ny tanàna manontolo ianao. Raha mahita ny filentehan'ny masoandro ianao dia hanana fomba fijery mahafinaritra. Ary raha amin'ny alina dia ho afaka hahita ny volana bebe kokoa amin'ny hehe. Ny tanàna amin'ny alina dia manana ny lokony, fa ny jiron'ny trano kosa manimba ny fomba fijery. Mahagaga fa lazaiko Petronas dia toy ny "Petrobrás" an'i Malezia. Eny, orinasa solika izy. Ny endriky ny trano dia lehibe M izay midika hoe Malezia. Ny Skybridge (tetezana afovoany) maneho ny tetezana mampitohy ny lasa sy ny ho avy ao amin'ny firenena, raha ny marina dia futuristic ny voatendrin'Andriamanitra. Ary goavana dia ny hampiseho ny maha zava-dehibe sy ny avonavon 'Malezia eto amin'izao tontolo izao.
Ary inona koa?
Any aoriana sy miala ny ascenseur dia misy toeram-pivarotana lehibe, anisan'izany ny Petronas Lego, ireo fanalahidy lehibe, fahatsiarovana, sns.
Teo anoloan'ny Tranobe Kambana misy efamira izay manana fampisehoana maimaim-poana ny rano manodidina ny 20: 00h Araka izany, tsy hanenenana andro niakatra hiala eo anoloan'ny handeha alina ny manodidina. Ny kianja sy ny fampisehoana rano dia manonitra ny làlana.
Soso-kevitra mazava, fa zava-dehibe ny mahatsiaro. Raha matahotra ny haavony ianao, dia mandoa vola any amin'ny toerana izy ary tsy mianika, fa jereo ny kianja zaridaina sy ny tilikambo Petronas.
Plus misy ny Aquaria KLCC (vanim-potoana iray ihany) fa koa mendrika ny fitsidihana, ny lainga momba ny 500 metatra miala amin'ny tilikambo sy Petronas dia ampahany amin'ny famerenana sy ny fanabeazana ny tontolo iainana ny orinasa miaraka amin'ny mifantoka amin'ny fiainana an-dranomasina, indrindra fa ity ny diloilo akaikin'ny lavaka fantsakana. Anisan'izany ny karazana hafa mifandraika amin'ny faritra. Tahaka ny hoe tokony hamoha ny olona amin'ny fanentanana ny tontolo iainana. Ny vorondolo kely eo amin'ny soroka (ny sary) dia miandry ny fitsidihanao. Ny antsipirihany, izy io dia owl amin'ny lanezy izay karazam-borona izay mipetraka amin'ny tundras, hatramin'ny hatreny ny vavany izay rakotry ny lamosina.
Hijanona eto aho mandrapahatongan'ny lahatsoratra manaraka.
Ary toy ny tendron'ny farany ho an'ny tantsambo voalohany any Malezia izay hiditra ao aminy na any amin'ny firenena mpifanolo-bodirindrina dia hiala ny rindrin'ny Boky-Aina izay tena tsotra sy mora ny manomana fitsangatsanganana an-tserasera.
Ho an'ny hafatra fanampiny, tsindrio ny sari-tany eto ambany.
soso-kevitra ho avy Malásia lasa Petronas Petronas Twins Towers